Gu’ga 2022-Kulanka Furan ee Kładka Tooska ah ee Dhamaystirka Mashruuca SR 509 – Hagaajinta Deegaanka | WSDOT
Gu’ga 2022-Kulanka Furan ee Kładka Tooska ah ee Dhamaystirka Mashruuca SR 509 – Hagaajinta Deegaanka
homeConstruction & planningOnline open housesGu’ga 2022-Kulanka Furan ee Kładka Tooska ah ee Dhamaystirka Mashruuca SR 509Hagaajinta Deegaanka
WSDOT waxaa ka go’an inay noqoto wakiil wanaagsan oo dhulka ah iyo lammaane mas’uul ka ah caawinta nidaamka deegaanka ee kala duwan ee gobolkeena si ay u barwaaqoobaan. Kooxda mashruuca waxa ka mid ah khubaro iyo injineero leh takhasusyo u dhexeeya khubarada deegaanka kalluunka ilaa kuwa sawaxanka falanqeeya. Si wada jir ah ayeey ula shaqeeyaan quruumaha qabaa’ilka, wakaaladaha maxalliga ah, iyo magaalooyinka, kooxdani waxay soo saartaa naqshadeynta iyo istiraatiijiyadaha yaraynta waxyeelada kuwaas oo yareynaya saameynta meelaha xasaasiga ah iyo degaannada aagga mashruuca.
Tusaale ahaan, barnaamijka dib u soo celinta WSDOT ma aha oo kaliya dib-u-dhexgelinta dhirta waddaniga ah iyo waddooyinka cusub ee dhismaha kadib, waxay sidoo kale diiradda saartaa horumarinta tayada biyaha iyo hawada, ilaalinta dhulka qoyan iyo meelaha kale, xakamaynta noocyada dhirta aan deegaan u dhalan, iyo ilaalinta nabaad guurka.
Hawlaha kale ee mashruuca ee caawiya kaydinta iyo ilaalinta deegaanka dabiiciga ah ee gudaha mashruuca SR 509 waxaa ka mid ah:
Meel isugu gaynta biyaha iyo daweynta
Yaraynta saamaynta dhulka biya fadhiisiga ah iyo yaraynta saamaynta dhulka biyaha fadhiistaan.
Qiimaynta deegaanka ee Mashruuca Dhamaystirka SR 509 iyo dukumeentiyada kale waxaa looga akhrini karaa websaytka Puget Sound Gateway.
Hagaajinta dhulka qoyan ee SeaTac iyo Des Moines
Naqshad ula kac ah – sida waddooyinka kor loo qaaday, marinnada kalluunka, iyo xaq u lahaanshaha qorsheynta – waxay wax badan ka tari kartaa yaraynta waxyeelada laga hortagi karo ee deegaanka dabiiciga ah. Si kastaba ha ahaatee, WSDOT waxay aqoonsan tahay in mashaariicda kaabayaasha waaweyn ay leeyihiin cawaaqib dhab ah. Tani waa halka ay mashaariicda yaraynta ka soo galaan.
Sannadkii 2007, WSDOT waxay dhamaystirtay goob horudhac u ah dhimista dhulka qoyan oo koonfurta ka xigta madaarka Sea-Tac. Goobta 3.66-acre ee AMB Property site ee dhimista hantida waxay ka saartaa saamaynta dhulka qoyan ee aan laga maarmi karin ee Mashruuca Dhamaystirka SR 509 ee qaabka dhul-qoyan iyo dib-u-habaynta iyo kobcinta.
Adiga oo bilaabaya in ka badan toban sano ka hor dhismaha mashruuca, goobaha yaraynta hore waxay ka caawinayaan ka fogaanshaha luminta deegaanka iyada oo la dhisayo nidaamka deegaanka qoyan ee ka baxsan goobta ka hor intaan dhismuhu bilaabmin
Intaa waxa dheer, WSDOT waxa ay qorshaynaysaa in ay ka fuliso mashruuca dib u soo celinta qoyan ee Barnes Creek ee Des Moines. Goobta yaraynta buuxda waxay ka bilaabmaysaa Kent-Des Moines Road ilaa South 220th Street iyo, marka la dhammeeyo, waxaa laga heli doonaa wadada Des Moines Creek. Mareegta Barnes Creek waxay sii fogaynaysaa saamaynta dhulka qoyan ee suurtogalka ah ee Mashruuca Dhamaystirka SR 509.
Dib u soo celinta Barnes Creek ee Des Moines waxay dib u soo noolayn doontaa 11.72 acres oo dhul qoyan ah iyo webiga ku hareeraysan (dhul-qoyanka u dhow) deegaanka duurjoogta gobolka iyo dhirta asalka ah sida Oregon Ash.